Chisarudzo cheMutungamiri muSenegal: # SunuDebat ichaitika musi waFebruary 21 - JeuneAfrique.com - TELES RELAY
HOME » KWEZVISUNGO Chisarudzo cheMutungamiri muSenegal: # SunuDebat ichaitwa musi waFebruary 21 - JeuneAfrique.com
Chisarudzo cheMutungamiri muSenegal: # SunuDebat ichaitwa musi waFebruary 21 - JeuneAfrique.com
FacebookFacebook1 TwitterTwitter0 Google pamwe cheteGoogle pamwe chete0
The nhimbe # SunuDébat, yakatanga kufamba muna January mangwanani nevamwe vagari wokuSenegal pamusoro network, ava pakupedzisira kuuya zviitike: a paterevhizheni gakava pakati wenyika musarudzo neChina February 21. Chete kissaa Sall vachiri yokuramba kuita.
Kokutanga munhoroondo Senegal, munhu paterevhizheni gakava achava vanoshora musarudzo dzemutungamiri wenyika. The cheni 2STV private terevhizheni, redhiyo uye Iradio Seneweb nzvimbo vakatenderana zvinenge zvekuratidza # SunuDébat kuitwa neChina February 21 manheru 72 maawa pamberi kunhivi wokutanga musarudzo musi February 24.
Mana kushorwa musarudzo - El Hadji Issa Sall Madicke Niang Ousmane Sonko uye Idrissa Seck - ndikazvisimbisa kuvapo avo gakava iri, kusiyana ichibviswa mutungamiri, kissaa Sall.
>>> VERENGA - [Tribune] Mutungamiri muSenegal: nei # SunuDebate?
Mamiriro ehurukuro iyi isina kubudiswa terevhizheni achiri kugadziriswa. Kukurukurirana pakati pevadzidzi kunofanira kuitika muchi Wolof, kuitira kuti vanzwisiswe nepamusoro peSenegal. Vatapi venhau vaviri uye muongorori vachave pachinangwa chekutungamirira hurukuro.
Nyaya dzenhaurirano dziri kuiswa, kunyanya nerubatsiro rweChristian Forum, sangano rakazvipira kune nyaya dzehugari hwehugari uye hurumende yakanaka. Vakarongeka vanodawo kugadzirisa nyaya huru dzakasimudzwa mumavhiki mashoma nevashandisi veIndaneti kuburikidza ne hashtag # SunuDébat.
Ichi chakhag, chakatangwa kutanga kweJanuary pa Twitter naAawa Mbengue, mudzidzi wechitatu weScience Po Paris, akakurumidza kukura muSenegal social social network.
Iyo pfungwa? Kuronga, sezvakaitwa mune dzimwe nyika dzakawanda, nhaurirano yehepfenyuro pakati pevatungamiri vakasiyana-siyana vehutungamiri vezvematongerwo enyika kuti vasangane nemapurogiramu avo kune avo vanovhota.
Issa Sall Madicke Niang Ousmane Sonko uye Idrissa Seck vakanga vakakurumidza varatidza kufarira kwavanoita gakava iri, kusafanana kissaa Sall. On Twitter, gurukota Gota mutariri pakukurukurirana, El Hadj Kasse Hamidou, vaiona kuti zvinhu chakadaro gakava havana asangana, sezvo "mafashamo kutukana" uye "asi unhu nezve" vavengi .
"Kwakangwara kuti tauye ikoko! Iye zvino tinotarisira kuti gakava iri richaitwa, "Awa Mbengue inopindura. "Yatova kukunda kuduku kuona kuti zvinhu zvose zviri kuiswa munzvimbo. # SunuDébat yakapfekedzwa nevechiSenegal vechidiki pamagariro evanhu. Izvi zvinoratidza kuti kana iwe ukateerera huduku uye uchivapa nzira, vanogona kuita zvinhu zvikuru. "
Cameroon: Paul Biya anozivisa kusikwa kwe500 000 Jobs mu2019
Prime Minister inowedzera zvipo zvevashumiri vake